Zika atiridii - Wikipedia
Zika atiridii (a wͻsan frε no Zika mmoawa yare yε yare a nea εde ba ne Zika mmoawa.Wͻn a wonya yare yi dodow no ara ntaa nnya εho nsεnkyerεnne, nanso mpεn pii no εda ne ho adi bͻkͻͻ na ebetumi asε ntontom atiridii.Nsεnkyerεnne no bi ne ahoͻhyew, ani a ayε kͻkͻͻ, dompe mu yaw, tipae, ne nsawansawa.Mpεn pii no, εho nsεnkyerεnne ntaa nni nnansͻnWͻ yare no mfiase mu no, εmmaa obi nhweree ne nkwa ε.Wͻde yare yi abata Guillain–Barré yare(GBS) ho.
Nea εde Zika atiridii ba titiriw ne ntontom a εyε Aedes de a waka obi no.Ebetumi nso atrεw denam nna mu yare a εnam nna mu trεw fi barima ho de ma wͻn a ͻne wͻn da na ebetumi atrεw nso denam mogya a wͻde ma mu. Wͻn a wͻanyinsεn a wͻanya bi betumi de ama wͻn mma na wͻde abata nyinsεn a εsεe ho ne ti a εyε ketewaa. Wͻyε yare yi mu nhwehwεmu denam mogya, dwensͻ, anaa ntasu mu a wͻhwehwε sε wobehu Zika mmoawa no anaa RNAbere a nipa no yare.
Wosiw ano denam ntontom a εde ba a wokunkum wͻn wͻ mmeae a yare no wͻ ne kͻndͻm a wͻde di dwuma wͻ nna mu so. Mmͻden a wͻbͻ de siw ntontom yi kwan ne nnuru a εpam ntummoa, ntade a wͻhyε, ntama a εpam ntontom, ne nsu a εtaataa hͻ a woyi fi hͻ. Wonni nsu a εko tia yare ma eyi. Akwanhosan ho adwumayεfo hyε nyansa sε mmea a wͻwͻ mmeae a yare Zika mmoawa a aba (afe 2015 de ba) kosi 2016 Zika a aba besusuw ho sε wͻbεtwe nyinsεn akͻ akyiri na wͻn a wͻanyinsεn nso nnkͻ mmeae yi. Bere a wonni ayaresa pͻtee no, paracetamol(acetaminophen) betumi aboa adwudwo ano. Mpεn pii no, εho nhia sε obi da ayaresabea.
Wodii kan huu mmoawa a εde yare yi ba wͻ afe 1947 mu. Yare yi a edii kan bae a wͻayε ho kyerεwtohͻ sii wͻ afe 2007 wͻ Micronesia aman mu. Ebedu Ɔpεpͻn afe 2016 mu no, na yare no wͻ amantam aduonu wͻ Amεrika amanmu. Wonim sε asi wͻ Afrika, Asia, ne Pacific amantam nso mu. Esiane sε yare no bae wͻ Brazil wͻ afe 2015 mu nti, Wiase Akwanhosan Ahyehyεde akyerε sε εyεAman nyinaa Akwanhosan ho asεm a egye Ntεmpε wͻ Ogyefo afe 2016 mu.
Retrieved from "https://ak.wikipedia.org/w/index.php?title=Zika_atiridii&oldid=21190"
This page was last edited on 23 Ɛbɔ 2019, at 03:48.